အားကစား ကုမ္ပဏီ SnowyOwl Tech သည် ခြောက် လအတွင်း ဒုတိယအကြိမ် ရန်ပုံငွေ ရရှိ ခဲ့သည် – Pandaily
Jan 19, 2022, 20:48ညနေ 2022/01/19 23:04:10 Pandaily
တရုတ် မီဒီယာ တင်ပို့မှု36krအားကစား နည်းပညာ ကုမ္ပဏီ SnowyOwl Tech သည် Angel Investment နှင့် Angel + Investment တို့၏ နောက်ထပ် ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှု နှစ်ခုကို ပြီးစီး ခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း ယွမ် သန်းပေါင်းများစွာ တန်ဖိုးရှိ ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
Angel Investment ကို K2VC (Dangerous Peak Evergreen) နှင့် Sequoia China Seed Fund တို့က ဦး ဆောင်သည်။ Angel + Round ကို Sequoia China Seed Fund က ဦး ဆော င်ပြီး Little Red Book နှင့် Aplus Partners Limited တို့က ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လတွင် တည်ထောင်ခဲ့သော ကုမ္ပဏီသည် နှင်း လျော စီး ခြင်းကို ၎င်း၏အဓိက ထုတ်ကုန် အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ပြီး အားကစား နည်းပညာ နှင့်အတူ ပြင်ပ လူနေ မှုပုံစံ အမျိုးမျိုးကို ဖုံးလွှမ်း ထားသော အမှတ်တံဆိပ် တစ်ခု တည်ဆောက်ရန် ကတိက ဝတ်ပြု ထားပြီး လူ အများအပြားကို ပြင်ပ အားကစား များတွင် ပျော်မွေ့ စေ ရန်ရည်ရွယ်သည်။
ကုမ္ပဏီ၏ အဖွဲ့သည် ပြင်ပ အားကစား အမျိုးမျိုး တွင်ပါ ၀ င်သည်။ ၎င်း၏ တရုတ် အဖွဲ့ ၏ဖွဲ့စည်း မှုမှာ အဓိကအားဖြင့် ဟာ့ဒ်ဝဲ နည်းပညာ၊ အင်တာနက် ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု နှင့်အခြား စက်မှုလုပ်ငန်း များမှ & nbsp မှဖြစ်သည်။ အဖွဲ့ဝင် အသစ် ။ ၎င်း၏ အမေရိကန် အသင်း သည်အဓိကအားဖြင့် ထိပ်တန်း နှင်း လျှော စီး ပစ္စည်းကိရိယာ R & D အင်ဂျင်နီယာ များ၊ တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခ များနှင့် ကျွမ်းကျင် သူများနှင့် ယခင် ကမ္ဘာ့ နှင်း လျှော စီး ချန်ပီယံ များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
အဘယ်ကြောင့် နှင်း လျှော စီး? ကုမ္ပဏီကို တည်ထောင်သူ Li Yao က အကြောင်းပြချက် လေးခု ပေးခဲ့သည်။ ပထမ အချက်မှာ တရုတ်နိုင်ငံတွင် နှင်း လျှော စီး ထိုးဖောက် မှုသည် ဆက်လက် တိုးပွားလာ လိမ့်မည်။ ဒုတိယအချက်မှာ ၂၀ ၂၂ ခုနှစ် ဘေဂျင်း အိုလံပစ် သည် ပြည်တွင်း နှင်း လျှော စီး ဈေးကွက် တိုးတက် မှုကိုမြှင့်တင် ပေးလိမ့်မည်။ တတိယ အချက်မှာ နှင်း လျှော စီး အခြေခံအဆောက်အအုံ များ ဆက်လက် တိုးတက် နေသည်။ လွန်ခဲ့သော ဆယ် နှစ်အတွင်း တရုတ်၏ နှင်း လျှော စီး အပန်းဖြေ စခန်း အရေအတွက်သည် ၃၀၀ မှ ၇ ၂၃ အထိ တိုးများ လာခဲ့ပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင် မိုးလုံလေလုံ နှင်း လျှော စီး ဥယျာဉ် အများ ဆုံးဖြစ်သည်။ စတုတ္ထ အချက် အနေဖြင့် နှင်း လျှော စီး ပစ္စည်းကိရိယာများ ကိုတစ် ဦး ချင်း သုံးစွဲ မှုသည် ဆက်လက် တိုးပွားလာ လိမ့်မည်။
လက်ရှိတွင် ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း နှင့်အမေရိကန် အဖွဲ့ နှင့်အတူ အဆင့်မြင့် နှင်း လျော စီး အမှတ်တံဆိပ် Whip ကို တီ ထွ င်ရန် လုပ်ဆောင် နေသည်။ ၎င်း၏ Overide အမှတ်တံဆိပ် အဖွဲ့သည် နှင်း လျှော စီး အဝတ်အစား များ၊ veneer ဖိနပ် များ၊ သံခမောက် များနှင့်အခြား ထုတ်ကုန် များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရန်ပြင်ဆင် နေသည်။
ဝှ ီး ချဲ သည် ၁၇ နှစ်အရွယ် အမေရိကန် နယ်ပယ် နှင်း လျှော စီး တံဆိပ် မှဆင်းသက်လာ ခြင်းဖြစ်သည်။ တ႐ုတ္ ႏွင္း ေလွ်ာ စီး ေစ်းကြက္ ေပါက္ကြဲ လာ သည္ကို ေတြ႕ရ ေသာေၾကာင့္ ကုမၸဏီက ၎၏ လုပ္ငန္း လည္ပတ္ မႈ တန္ဖိုး ႏွင့္ ကိုက္ညီ မည့္ နည္းပညာ စုေဆာင္း မႈ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနသည့္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ မိတ္ဆက္ ရန္ ဆံုးျဖတ္ ခဲ့သည္။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:တရုတ် ကုမ္ပဏီ Deep Blue Aviation သည် Round A ရန်ပုံငွ ေဒေါ်လာ ၃၁. ၅ သန်း နီးပါး ရရှိ ခဲ့သည်
နှင်း လျှော စီး သမား များ၏ အတွေ့အကြုံ ကိုတိုးတက်စေရန် ကုမ္ပဏီသည် နည်းပညာဆိုင်ရာ ပစ္စည်း အသစ်များ ကိုတီထွင် နေသည်။ WeChat အက် ပလီကေးရှင်း များနှင့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ် များ၏ အော့ ဖ် လိုင်း လိုင်း များသည် နှင်တံ ၏အဓိက စျေးကွက်ရှာဖွေရေး လမ်းကြောင်း များဖြစ်ပြီး ပြည်ပ လွတ်လပ်သော ဘူတာ များနှင့် အမေ ဇုံ တို့သည် Olid ၏အဓိက အရောင်း လမ်းကြောင်း များဖြစ်သည်။
Tags ∗xiaohongshu | financing | sequoia capital china | SnowyOwl
Startups Jan 19 ဇန်နဝါရီ 19, 2022